Iyo laser yekumaka muchina inoshandiswa zvakanyanya, uye chigadzirwa kuzivikanwa kwenzvimbo dzese dzehupenyu dzinogona kwazvo kugutsikana. Iyo fiber laser yekumaka muchina, iyo kabhoni dioxide laser yekumaka muchina, iyo ultraviolet laser yekumaka muchina, iyo chaiyo zvinhu inofanirwa kushandiswa kuona icho chigadzirwa zvinhu, yekumaka zvemukati Uye mhedzisiro zvinodiwa. Zviri nyore kushandisa, chichava kudzidziswa kudiki.
SK-GL fiber laser yekucheka muchina chigadzirwa chakakura mune ye laser kugadzira indasitiri ine inotungamira michina muindasitiri uye inosvika kune yepasi rose inotungamira nhanho. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa ndiyo yekutanga sarudzo yesimbi yekugadzirisa indasitiri. Iyo ine simba rekucheka kugona, "kubhururuka" yekumhanyisa kumhanya, yakaderera kumhanya mutengo, kugadzikana kwakanyanya, kugadzirwa kwemhando yepamusoro uye kusimba kuchinjika. Ultra-yakakwira-kumhanya yakangwara fiber laser yekucheka muchina, jira simbi yekucheka chishandiso. Kubudirira kusingaenzaniswi uye kugadzirisa kurongeka.
SK-GL fiber laser yekucheka muchina chigadzirwa chakakura mune ye laser kugadzira indasitiri ine inotungamira michina muindasitiri uye inosvika kune yepasi rose inotungamira nhanho. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa ndiyo yekutanga sarudzo yesimbi yekugadzirisa indasitiri. Iyo ine simba rekucheka kugona, "kubhururuka" yekumhanyisa kumhanya, yakaderera kumhanya mutengo, kugadzikana kwakanyanya, kugadzirwa kwemhando yepamusoro uye kusimba kuchinjika.
Ultra-yakakwira-kumhanya yakangwara fiber laser yekucheka muchina, jira simbi yekucheka chishandiso.
Kubudirira kusingaenzaniswi uye kugadzirisa kurongeka.
1313 Laser Muchina
Inogona kushandiswa kune isiri-simbi yekugadzirisa. Inoshandiswa zvakanyanya mukushambadzira indasitiri, indasitiri yemabasa emaoko, matoyi, zvipfeko, kuvaka, kurongedza, bepa, nezvimwewo zvinoshanda zvinhu: acrylic, MDF bhodhi, zvipfeko, dehwe, bepa, nezvimwe.
1) Yakaparadzaniswa dhizaini: nyore kuisa mumusuwo wakamanikana (kunyangwe 80cm upamhi hwedhi).
2) Yese rairo rairi inotumirwa kubva kuTaiwan (Shangyin neCSK) uye epakutanga magwaidhi enzira akagadzirwa nemasiraidhi.
Laser yekuveza uye yekucheka muchina Laser yekumisikidza uye yekucheka kumucheto yekucheka muchina Zvakabatana parameter: Chigadzirwa modhi SY 1610 [Yakakosha modhi rutsigiro yakagadzirirwa]
Yakapinza Linear gwara njanji uye yakakwira yekumhanyisa inotsika mota uye mutyairi kuti iyo yekucheka kumucheto ive yakatsetseka uye isina kugadzirwa; Tora yakasanganiswa furemu dhizaini dhizaini yekuita muchina unomhanya wakadzikama pasina ruzha; Rakareruka mashandiro, sarudzo yekuveza kuteedzana, yekumisikidza nhanho, inochinjika kugadziridzwa kwemalaser simba, kumhanya uye yakatarisana kureba kwenzvimbo kana zvese-imwe-nguva kuburitsa; Vhura software interface, inowirirana neAutocad , Coreldraw, goai chivezwa, Photoshop uye imwe vector mifananidzo dhizaini software; Yakashongedzerwa nemvura yekuzorora inodzivirira, zvirinani kuchengetedza laser, kuwedzera hupenyu hwe laser, inosarudzika tsoka tsoka chinja, ita kuti basa rako rive nyore uye nekukurumidza. Dhizaini dhizaini; Super simba simbi ndiro, maindasitiri giredhi; Zvinobudirira kuvimbisa kumeso mashandiro uye sevhisi hupenyu hwemidziyo; Double gwara njanji oparesheni; Belt dhiraivha; Iwe unogona kusarudza kumisikidza uchi / grid / gorofa / kusimudza;
Patent tekinoroji: yakasarudzika kumusoro-pasi uye pasi-dhizaini hutsi uye guruva kubvisa system; Kufuridza kuchengetedza; Carve yekucheka zvinhu.
Laser yekuveza uye yekucheka muchina Laser kumisikidza uye yekucheka kumucheto yekucheka muchina Zvakabatana parameter: Chigadzirwa modhi SY 3040-6090–1390-1313-1414-1610-1325 [Yakakosha modhi rutsigiro yakagadzirirwa]
6090 CNC achiita zvokutemera Machine
MK6090 nhepfenyuro ine basa rakasimba nekuita kwakanaka, nyore kushandisa, yakasimba uye yakasimba. Inoiswa zvakanyanya mukushambadzira, acrylic, ndarira, Wood, Plastic, Aluminium, Di-Bond, Engraving Board, Fomex. Engineering mapurasitiki, machena, acrylic, perspex, PVC, rinoumba Panel, Mhangura, Alloys, MDF, etc.
ETinoita iyi tambo makore mazhinji, tine ruzivo rwakapfuma uye ruzivo rwehunyanzvi, tinokurega iwe utore muchina wakakodzera kwazvo nekugadziriswa kwakakodzera. Kugona uku kunogona kukutendera kuti udzivise kukanganisa kwakawanda uye kudzivirira mamwe matambudziko. Imwe fekitori inowanzo shaya chiitiko ichi, uye inounza dambudziko kune mutengi chaiye.
UseKana ukashandisa muchina wekucheka weplasma kutema chikafu chakakora, unofanirwa kushandisa arc kukwirira gadziridza system, nepo kukwirira kwedu kuchinjisa sisitimu inoshandisa iyo yepamusoro sensor, miniti imwe chete inogona kutumira kunze12, 000 chiratidzo paminiti nepo imwe kukwirira gadzirisa system inowanzo tumira 10000 chiratidzo paminiti, soour yekucheka mhando iri nani kupfuura imwe fekitori uye yekumhanyisa kumhanyisa marara nekukurumidza kupfuura iyo yakafanana simba replasma sosi.